July 9, 2012 – democracy for burma
7 July 50 Years TV Talkshow-Video
On July 9, 2012 July 9, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Burma_Myanmar president-office /briefing-room/daily-news )9July ဒုတိယဝနျကွီးမြားပွောငျးလဲတာဝနျပေးခွငျး (အမိနျ့အမှတျ၊ ၁၅/၂၀၁၂) (၉-၇-၂၀၁၂)
ဒုတိယဝနျကွီးမြားပွောငျးလဲတာဝနျပေးခွငျး (အမိနျ့အမှတျ၊ ၁၅/၂၀၁၂) (၉-၇-၂၀၁၂)
၁၃၇၄ ခုနှဈ၊ ပထမဝါဆိုလပွညျ့ကြျော ၆ ရကျ
(၂၀၁၂ ခုနှဈ၊ ဇူလိုငျလ ၉ ရကျ)
ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒပေုဒျမ ၂၃၄၊ ပုဒျမခှဲ (က)၊ (ဃ)နှငျ့ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ ဥပဒပေုဒျမ ၁၆၊ ပုဒျမခှဲ(ခ)၊ ပုဒျမခှဲငယျ( ၉) တို့အရ အောကျဖျောပွပါ ဒုတိယဝနျကွီးမြားအား ၎င်းငျးတို့၏ အမညျနှငျ့ ယှဉျတှဲဖျောပွထားသော ပွညျထောငျစုဝနျကွီးဌာနအသီးသီးတှငျ ပွောငျးလဲတာဝနျပေးလိုကျသညျ-
ဦးသနျ့ရှငျး ဒုတိယဝနျကွီးသမ်မတရုံးဝနျကွီးဌာန (၁)
Wat Saimoon ( Burmese monastery) Chiang Mai Thailand Protest9July Photos-Irrawaddy Blog
ရှေ့ပြေးရောက်လာတဲ့ လုံခြုံရေးအရာရှိ ၂ ဦး နဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့မြန်မာသားများ (ဓာတ်ပုံများ – ဧရာဝတီ)
The residing Thai abbot and the local Thai people are attempting to
take over the Wat Saimoon (the Burmese monastery) on July 9, 2012.
In order to preserve and protect our Theravada Buddhism in Thailand,
we would like urge you to join us defending our monastery on behalf of
the people in Burma.
ချင်းမိုင်မြို့ရောက် မြန်မာပြည်သားအများအပြားဟာ ဒီကနေ့မနက် ကျုံးတောင်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ ၀ပ်ဆိုင်မွန်း မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားရောက်ပြီး ဒီကျောင်းမှာ မြန်မာကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး ထားရှိရေးကို လိုလားကြောင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြပါတယ်။
မွန်းလွဲပိုင်းမှာ ထိုင်းသံဃာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အာဏာပိုင်တွေ ရောက်ရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အတွက် ဆိုင်းဘုတ်တွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတာပါ။
ရောက်လာတဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ဒီကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ မြန်မာသံဃာတွေ၊ ဒကာ ဒကာမတွေနဲ့ သွားရောက် တွေ့ဆုံပါတယ်။ ထိုင်းသံဃအဖွဲ့အစည်းက ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေအရ ထိုင်းသံဃာတပါး ဒီကျောင်းမှာ ကျောင်းလာထိုင်မယ့်အကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။
ဒီကျောင်းကို မကြာသေးမီကအထိ မြန်မာဆရာတော်တွေပဲ ကျောင်းထိုင်ခဲ့တာပါ။
နောက်ဆုံး ကျောင်းထိုင်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူပြီးနောက်ပိုင်း ထိုင်းသံဃာတပါး ကျောင်းထိုင်အုပ်ချုပ်မယ့် အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
ထိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိများက ကျောင်းထဲက ပရိသတ်ကို အချိန်ယူပြီး ရှင်းပြနေတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဘာသာပြန်သူများကလည်း ၀င်ရောက် ကူညီ ဘာသာပြန်ပေးနေကြပါတယ်။
ကျောင်းကို ၀င်ထွက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သားများ၊ သတင်းထောက်များရဲ့ မေးခွန်းကိုလည်း အုပ်ချုပ်ပိုင်းက ဖြေကြား ရှင်းပြပါတယ်။
နေ့ခင်း နှစ်နာရီခွဲမှာတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့ကို အချုပ်ကားတစီး နဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ ရောက်လာပါတယ်။
ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများဘက်က ရုန်းရင်းဆန်ခတ် မလုပ်ဘူး၊ အချင်းချင်း အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာကျောင်းထဲက လူစုလူဝေးက အေးအေးဆေးဆေး အိမ်ပြန်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Continue reading “Wat Saimoon ( Burmese monastery) Chiang Mai Thailand Protest9July Photos-Irrawaddy Blog” →
IFBNC Statement ( Photos ) New York Golden Jubilee July7Memorial Day
On July 9, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Burma_Arakan: clashes have been between Burmese and Rohingya Bengali; not between Buddhists and Muslims.
On June 16, 2012, The Daily Star, online newspaper of Bangladesh published an op-ed titled “The Rohingya question” written by Ashfaqur Rahman,a“former Ambassador and commentator on contemporary issues”. He blatantly wrote, “Indeed up to 1784, Arakan was an independent Muslim kingdom. In that year it was colonized byaBuddhist Burmese king called Bodawphaya.” All experts and Burmese people know the statement is totally false. Such statement has caused widespread anger among Burmese who are very proud of their rich history and heritage. It clearly indicates Mr. Rahman has never been to Arakan where Buddhism has flourished for over 2000 years and Buddhist pagoda shines on almost every hilltop. Continue reading “Burma_Arakan: clashes have been between Burmese and Rohingya Bengali; not between Buddhists and Muslims.” →